चलचित्र चचहुई को दोस्रो आ'इटम गीत जवानी सार्वजनिक ( हे'र्नुहोस भिडियो) —
काठमाडौँ । चलचित्र चचहुई को दोस्रो आ’इटम गीत जवानी सार्वजनिक ( हे’र्नुहोस भिडियो) नेपालि कथानाक फिल्म चचहुई को दोस्रो गित जवानी युटुब मा सार्बजानिक भएको छ ! सार्बजानिक भएको आइटम गित मा मोडल एलिसा शर्मा र नायक आर्यन सिक्देल ले अभिनय गरेका छन् ! सार्बजनिक गीतमा रोशन र सुमन गुरुङ’को स्वर, बिनय सापकोटा’को शब्द र रोशन थापा’को संगीत रहे’को छ । भिडियो’मा शिशिर खातीको कोरियो’ग्राफी रहेको छ ।
साम्तेन भुटियाले निर्देशन रहेको चलचित्रमा सिजन दाहाल र सन्देश अर्यालको पटकथा, सुशन प्रजापतिको छायाकंन र भुटिया आफ्नै सम्पादन रहेको छ । चलचित्रलाई ‘एजीएल इन्टरटेनमेन्ट’को ब्यानरमा अमृत घोले लामाले निर्माण गरेका हुन् । चलचित्रमा आर्यन, मिरुना र भोला ,माओत्सेसँगै पुस्कर गुरुङ, बबिता मल्ल लगायतको कलाकारले अभिनय गरेका छन् । यो चलचित्र मंसिर ६ गतेबाट रिलिज हुदैँछ । हेरौ भिडियो
यो पनि पढ्नुहोस ! सोनीकाले लिइन् कपिल शर्माको अन्तरवार्ता । कपिलले गाए ‘रातो टिका निधारमा’ (भिडियो सहित)
नेपालमा ‘वाउ नेपाल’ युट्युब च्यानलमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरेर चर्चामा आएकी उनले ‘द कपिल शर्मा सो’का होस्ट कपिललाई भेटेकी हुन्। उनले आफ्नो व्यक्तिगत च्यानल ‘द सोनीका सो’का लागि चर्चित कमेडियन कपिलसँग अन्तरवार्ता लिएको बताएकी छिन्।सोनीकाले कपिल सँगको अन्तर्वार्ता आइतबार आफ्नै युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरेकी छिन् ।
उक्त अन्तर्वार्तामा नेपाली गीत ‘रातो टिका निधारमा’ बोलको गित कपिलले गाएका छन् । कपिलले नेपाल र त्यहाँ रहेका नेपालीहरू निकै मन पर्ने पनि बताएका छन् । अन्तर्वार्ता अन्त्यमा सोनीकाले कपिललाई मायाको चिनो मार्फत नेपाली ढाका टोपी पनि दिएकी छिन् । बाँकी भिडियो हेर्नुहोस्
काठमाडौँ। नेपाली युट्युबर सोनीका रोकायाले चर्चित भारतीय कमेडियन कपिल शर्माको अन्तर्वार्ता लिएकी छिन् । केही दिन...